Daawo: Sawirada Virgil Van Djik Oo U Dabaal Degaya Goolkii Mohamed Salah Ee Fc Porto Xitaa Isaga Oo Aan Dhalin – Wararka Ciyaaraha Maanta
Daawo: Sawirada Virgil Van Djik Oo U Dabaal Degaya Goolkii Mohamed Salah Ee Fc Porto Xitaa Isaga Oo Aan Dhalin
April 18, 2019 kooxda Premier League, Wararka Maanta 0
Liverpool ayaa iska xaadirisay Semi-finalka tartanka champions League kadib markii ay goolashii labada lugood 6/1 ku garaaceen kooxda Fc Porto kulan ka tirsanaa 8 dhamaadka tartanka champions League.
Goolal ay dhaliyeen Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino iyo Virgil Van Dijk ayaa ka caawiyay Reds in ay Fc Porto ka gaadho guul ay u qalantay kulan ka tirsanaa lugtii 2-aad ee 8 dhamaadka champions League.
Inkasta oo ay Liverpool wajihi doonto kooxda Barcelona Semi-finalka tartanka hadana Reds ayaa fursad u haysata in ay ku wada guulaysato tartanka champions League iyo Premier League hadii ay sidooda u dhacdo.
Xiddigaha Klopp ayaa kalsooni weyn isku qaba iyada oo la arkay Virgil Van Djik oo dabaal degaya ka hor intii uuna Mohamed Salah xitaa dhalin goolkii 2-aad ee Kulankii Fc Porto kulankii ka dhacay Garoonka Estadio De Dragao.
Liverpool ayaa qaaday weerar rogaal celis ah iyada oo uu Daafaca Trent Alexander-Arnold baas cajiib ah u dhiibay Mohamed Salah kaas oo shabaqa kubada dhex dhigay.
Sawirada halkan hoose Ka Daawo